Home News Blog Mahatsiaro tena ho meloka ve ianao amin'ny fitantanana ny fotoana hijerenan'ny zanakao?
“Matetika aho rehefa miara-miasa amin'ny fianakaviana dia manomboka miresaka momba ny fiatraikany ara-batana amin'ny fotoan-tsehatra. Ahoana ny fandikana ny fotoana an-tsarimihetsika amin'ny soritr'aretina manokana, ary ny fomba fampiharana extension haingana elektronika (na ny efijery haingana) dia afaka manampy amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny ati-doha ary hanazava izay mitranga.
Fa aleo hatrehana izany. Ny mandre fa ny lalao video, ny fandefasana hafatra an-tsoratra ary ny iPad dia mety mila fady amin'ny fianan'ny zaza dia tsy mameno fifaliana feno olona iray. Fa kosa, ho an'ny ray aman-dreny maro, dia miteraka faniriana avy hatrany ny hanaratsy ny vaovao na hiasa manodidina azy. Indraindray rehefa lazaiko amin'ny ray aman-dreny ny zavatra tokony hataon'izy ireo hamerenana ny raharaha, dia tsapako fa very azy ireo aho. Niala ny mason'izy ireo, nibolisatra izy ireo ary toy ny teo amin'ny seza mafana izy ireo. Tsy izany no tadiavin'izy ireo ho re. Tahaka ny ilazako azy ireo fa mila miaina tsy misy herinaratra izy ireo. Toy izany ny fisidinan-drakitra efa raiki-pitia amin'ny fiainantsika. Ny tsy fanelingelenana amin'ny zavatra arosoko dia toa mavesatra.
Inona no mahatonga ny fanoherana ny ray aman-dreny?
Ankoatry ny fahatahorana ny fahasahiranana, na izany aza, ny firesahana ny fotoana an-tsarimihetsika dia matetika miteraka fahatsapana tsy mahazo aina hafa izay miteraka fanoherana amin'ny firosoana amin'ny fitsaboana. Ohatra, ny olona sasany dia mahatsapa ho toa azy ireo fitaizana tsaraina ny fahaiza-manao. Na tsy ankasitrahana ny ezak'izy ireo na ny havizanan'izy ireo.
Saingy ny lavitra indrindra no mpamily ny fanoherana lehibe indrindra ataon'ny ray aman-dreny raha miresaka ny fotoanan'ny efijery dia ho meloka. Ity fahatsapana ho meloka ity dia mety hipoitra avy amin'ny loharanom-pahalalana isan-karazany, izay azo zaraina malalaka amin'ny sokajy roa: ny fahatsapana ho meloka noho ny fiandrasana ny alahelon'ny zaza, ary ny fahatsapana ho meloka amin'ny zavatra nataon'ny ray aman-dreny na tsy mbola nataony. Marihina fa ny fiandrasana fotsiny ny fahatsapana ho meloka dia ampy hamoronana fanoherana.
Loharanon'ny fahatsapana ho meloka avy amin'ny ray aman-dreny izay mety hanelingelina ny fitantanana fotoana-salama:
Meloka noho ny manala hetsika mahafinaritra ary miandrandra ny famoizam-po / fanahiana / fahakiviana /fahatezerana hiteraka izany ny fanesorana ireo fitaovana
Meloka noho ny fahitana na sary an-tsaina ny momba ilay zaza “Nilaozana” ara-tsosialy na tsia "eo am-pelatanana" (raha tena misy izany na tsia)
Manala zavatra fampiasana zaza hiatrehana, mandositra, na mampitony ny tenany. Indrindra raha tsy manana namana, fialamboly, filalaovana sary an-tsaina na zavatra tsy misy sarimihetsika ilay zaza
Meloka noho ny fiankinan-doha be loatra amin'ny fampiasana ny efijery ho "mpitaiza elektronika ” hahavita zavatra na hanana fotoana mangina
Meloka noho ny fahatsapana fa ny ray aman-dreny mihitsy no mety nitondra ny olana tamin'ny zanany—Mahafantatra na tsy fantatra — amin'ny fampidirana fitaovana ao an-trano na tsy fametrahana fetrany, ohatra (“inona no nataontsika?”)
Ny olon-dehibe dia manao maodely fanao amin'ny efijery ho an'ny ankizy. Misy ny fahatsapana tsy mahazo aina fa tsy mandeha amin'ny mandanjalanja na ampiasaina hialana amin'ny olana na fandosirana ny fotoana iasan'ny ray aman-dreny azy manokana
Meloka noho ny tsy te handany fotoana hilalao / hifaneraserana miaraka amin'ilay zaza, tsy maniry azy ireo ho ao amin'ny efitrano iray, na noho ny fahatsapana ratsy amin'ny zaza na ny fihetsiky ny zaza (fahatezerana, lolom-po, fahasosorana, tsy fitiavana sns); ireo no fahatsapana izay heverin'ny ray aman-dreny, indrindra ny reny, ho tsy eken'ny fiaraha-monina
Ny Toetran'ny fanamelohana
Ny fahatsapana ho meloka dia fihetseham-po tsy dia mampahazo aina, ary, toy izany, natioran'olombelona ny tsy mahatsapa izany. Mba hanasaro-javatra bebe kokoa, ny fahatsiarovan-tena ho meloka (ny olona mahatsapa fahatsapana ho meloka). Na mety ho izany tsy mahatsiaro tena (tsy mahafantatra ny olona ary mampiasa fiarovana fiarovana mba hahatonga ny fahatsapana ho mahafinaritra kokoa). Na mety ho eo anelanelany.
Ohatra, miaraka amin'ireo loharanom-pahotana telo voalohany voalaza etsy ambony, matetika ny ray aman-dreny dia afaka mamantatra ireo fahatsapana ireo. Na izany aza, ho an'ny ray aman-dreny mandalo a fisaraham-panambadiana, mety misy ambadika fahatsiarovan-tena ho tsy fahatsiarovan-tena momba ilay zaza nilaozana (ara-pihetseham-po na ara-bakiteny) na momba ny vesatry ny fiainana ao an-trano roa. Ity heloky ny ray aman-dreny ity dia mety hampitombo izany fijaliana na fandaozana. Ary mety tsy mifanaraka amin'ny zava-misy marina izany. Izy io dia mety hitarika amin'ny fahaverezam-poinana izay mampivadika ny herin'ny herinaratra ao an-trano.
Diniho ny tantaran'i Ali, a ketraka telo ambin'ny folo taona ankizivavy. Nandevozin'ny haino aman-jery sosialy izy, fanapahana amin'ny tenany, ampijalina amin'ny Internet, ary tsy mahomby any am-pianarana. Vao nandao ny fianakaviana ilay raim-pianakaviana ary nifindra tamina vehivavy hafa sy ny zanany. Ny renin'i Ali dia imbetsaka tsy nahomby tamin'ny fanesorana ny fidirana amin'ny fitaovan'ny zaza amin'ny alina sy ny efitrano fandriana. Na eo aza ny resaka maro momba ny rohy misy eo aminy maivana amin'ny alina amin'ny efijery sy famoizam-po / famonoan-tena, haino aman-jery sosialy sy fahaketrahana / tsy fahatokisan-tena, ary media sosialy sy fanaovana herisetra. Raha ny marina dia toa nahatakatra tsara ny siansa sy ny fikarohana ao ambadik'ireo fikarohana ireo ity renim-pianakaviana ity.
Etsy an-tany dia nisy ny fahatsapana ho meloka tamin'ny fangalarana zavatra nalain'i Ali ho fandosirana ary hibodo tena. Saingy teo ambanin'io dia nisy sosona hafa izay nila fotoana fohy hiaiky ny reniny. Noheveriny ho tezitra ny zanany vavy ary nanisy fanamarihana toy ny hoe: “Halako ianao!” ary “Manimba ny fiainako ianao!” (fahaiza-manao tovovavy fahaizana amin'ity taona ity indrindra). Ity seho an-tsaina ity dia nifandray tamin'ny a tahotra an'ny zanany vavy "tsy tia ahy intsony". Izay faminaniana tsy mitombina miorina tsy avy amin'ny fisaraham-panambadiana fa avy amin'ny reniny fahazazana. Ho an'ity fianakaviana ity dia be ny fahatsiarovan-tena sy ny fahatsiarovan-tena tsy nisy fahatsiarovan-tena. Tsy maintsy namboarina izany alohan'ny nahafahan'ny reny nametraka fetra sahaza azy.
Amin'ny lafiny ankafiziny, ny ankizy - indrindra ny ankizy sy ny vehivavy antitra, fa ny zazalahy koa mahay manao izany - dia mety handray ireo "fahalemena" ireo ary hitrandraka azy ireo hamitahana ny ray aman-dreny. Ity dinamika ity dia mety manimba amin'ny tranga teknolojia fiankinan-doha ary any amin'ny tokantranon'ny ray na reny tokan-tena.
Fambara izay mety hisy fiatraikany amin'ny fitantanana fotoana-tsy-tsiny
Fa raha tsy mahatsiaro tena ny meloka dia ahoana no ahafantarantsika fa misy fiatraikany amintsika izany? Araka ny voalaza, satria tsy mahazaka olona loatra ny fahamelohana, dia mampiasa rafitra fiarovan-tena isika mba hampielezana azy. Raha resaka elektronika dia fomba iray hanamafisana ny fahadisoan'ny ray aman-dreny ny fampiasana ny antony:. "Ny fotoana an-tsary dia ny fotoana manginan'ny zanako". "Ny elektronika dia mamela ahy hamita zavatra". "Ny fotoana an-tsary no hany mpanentana miasa". "Izany no ataon'ny ankizy rehetra, ary na izany aza, ny zanako dia mampiasa azy kely kely noho ny hafa". "Avelako izy hilalao lalao fanabeazana". Sy ny sisa. Raha hitanao fa mandanjalanja ny fampiasana ny zanakao na eo aza ny fahalalana, ny fihainoana, na ny famakiana fa mety ilaina ny mampihemotra na manao fifadian-kanina elektronika, misokatra amin'ny fiheverana fa ny fahatsapana ho meloka no mitondra ny lamasinina.
Ny famantarana iray hafa momba ny fisian'ny fahatsapana ho meloka dia raha ny lohahevitry ny fotoana an-tsary dia tsy mahazo aina anao na manahy. Araka ny efa voalaza tetsy aloha, dia mety hiseho amin'ny fisorohana ny lohahevitra na amin'ny fitadiavana fomba hanaratsiana ny vaovao. “Raha izany no antony tsy ho fantatry ny mpitsabo izany?” na “Raha izany no izy dia ho resy / ho andevozin'ny / ho romotra isika rehetra” na “Izany koa no nolazain'izy ireo momba ny fahitalavitra taloha — ary dia nihatsara izahay!”
Ny valiny mandohalika amin'ny fanaratsiana ny fampahalalana nefa tsy mijery azy dia mety ho famantarana fa misy zavatra azonao amin'ny fampiasa amin'ny efijery izay maharary ny mandinika. Ohatra, ny fandaniam-potoana miaraka miaraka tsy misy efijery amin'ny buffer dia mety hanery ny ray aman-dreny hiatrika olana ao a fanambadiana fa tsy raharahain'izy ireo avy hatrany.
Fandresena ny helokao mifandraika amin'ny fitantanana fotoana
Voalohany, miezaha mafy mihoatra ny olombelona mba hanao ny marina amin'ny fomba maharary amin'ny tenanao. Ohatra, ao amin'ny fianakaviana iray misy zazalahy sivy taona lasa andevozin'ny lalao video, taorian'ny volana maromaro nitazomana ny lalao video tao an-trano dia nampiditra azy ireo indray izy rehefa nanao vakansy. Tamin'ny fahitana azy voalohany dia toa toy ny hoe nilomano tamina fahatokisan-tena izy ary nieritreritra fa ho azo antoka ny fanandramana azy ireo indray. Saingy rehefa tsy nahavita nanala ny lalao indray ilay reny rehefa mazava ny antony a lavo indray, noterena hanao fikarohana fanahy izy. Tamin'ny farany dia nizara ity izy: “Tsy hoe hoe andevozin'ny lalao fotsiny izy. Izay ilay izy Miankin-doha amiko ny miakatra any amin'ny efitranony. ”
Tsy ny filàna fotoana mangina fotsiny io no nekeny. Niaiky kosa izy fa matetika dia tsy te ho eo akaikin'ny zanany lahy. Mbola niady tamin'ny fananganana fahatsapana tena tsy miankina amin'ny efijery izy ary mora romotra. Ny vahaolana eto dia tsy ny fanabeazana indray fa mba hahitana fanohanana bebe kokoa. Nahavita tamin'ny alàlan'ny fangatahana ireo olona ao amin'ny fianakaviany izy mba hiara-dia aminy isan-kerinandro.
Reny iray hafa no nilaza mazava an'io fahatsapana io. Rehefa nanoro hevitra azy aho fa hanao fifadian-kanina elektronika hanampiana ny fahasosoran'ny zanany lahy sy ny tolom-pianarana - ampahany iray lehibe amin'izany ny fandaniam-potoana manokana amin'ilay zaza – dia hoy ny navaliny: “Fa maninona no hataoko izany? Miasa toy ny lavaka kely izy! ”
Eny ary, angamba ity reny farany ity tsy niady tamin'ny fahatsapana ho meloka per se hatramin'ny nanambarany tsy misy fisalasalana ny fihetsehampony. Fa lazaiko anao ity tantara ity mba hanehoana ny fahita mahazatra azy. Izay mitondra ahy amin'ny teboka manaraka. Ankoatry ny fanaovana ny marina sy ny fanekena ny fahatsapana ho diso na fahatsapana hafa dia mety hanimba ny sarinao-fotoana fitantanana, fantaro fa saika ny fianakaviana tsirairay dia miaina fitambarana (na izy rehetra) amin'ireo teboka voalaza etsy ambony. Ara-dalàna izany.
Singa iray hafa manan-danja amin'ny famindrana ny heloky ny lasa ny famelan-keloka. Zava-dehibe indrindra io ho an'ny laharana faha-5 etsy ambony, ary mety tafiditra ao koa -tena famelan-keloka na famelana heloka ny vady na olon-kafa mpikarakara. Ny ray aman-dreny dia mety hipetraka, tsy ho variana, na hikapoka ny tenany noho izay efa nitranga. Amin'ireo loharanom-pahalalana meloka rehetra dia ity no mety hampijaly indrindra, indrindra raha manana fahalemena toa ilay zaza autiste, ADHD na aretin-tsaina miraikitra ary ny ray aman-dreny dia manomboka mahafantatra tsara ny tanjaky ny hyperarousal sy disregulation mifandraika amin'ny efijery ary ny loza mety hitranga amin'ny fiankinan-doha amin'ny teknolojia amin'ny vahoaka marefo.
Na ahoana na ahoana, ny fiheverana izay efa nitranga dia tsy mamokatra. Fa ankoatr'izay, hatramin'ny vao tsy ela akory dia tsy fantatry ny besinimaro ny loza mety hitranga. Na ireo mpitsabo aza dia manao ambanin-javatra azy ireo na dia ankehitriny aza. Ambonin'izany, misy ny ezaka narindran'ny orinasa mampiasa sophisticated -barotra teknika hamoronana fisalasalana sy fisavoritahana momba ny loza mety hitranga amin'ny vahoaka isan'andro. Ny risika rehetra entin'ny besinimaro tsara dia toherin'ny naysayers: “Manamboatra mpandidy tsara kokoa ny Gamers!” “Manampy antsika rehetra ny media sosialy!” “Mivoatra ny teknolojia fampianarana! " sy ny sisa. Ny manaikitra rehetra dia mandefa ny hafatra hatrany hatrany amin'ny ray aman-dreny fa ny fampiasana teknolojia miorina amin'ny efijery dia feno tombony. "Ny fomba fiainan'ny ankizy ankehitriny ihany io."
Na dia tsy afaka mamela ny tenanao na olon-kafa eo noho eo aza ianao dia aza avela hitazona anao lavitra izany. Manomboha mandray dingana — amin'ny endrika fanabeazana na amin'ny firesahana amin'ireo fianakaviana hafa izay tsy misy efijery amin'ny ankapobeny. Ataovy tanjona ny hanandrana andrana iray haingana elektronika mandritra ny telo ka hatramin'ny efatra herinandro na dia tsy mino ianao fa hanampy izany. Raha vantany vao manomboka mahita ny tombony sy ny fiovana eo amin'ny zanany sy ny fianakaviany ny ray aman-dreny, dia vetivety dia tsy voatana izy ireo ary miala amin'ny fahatsapana fa tsy afa-manoatra ka lasa mahazo hery.
izany lahatsoratra dia navoaka voalohany tao amin'ny Psychology Today tamin'ny taona 2017. Navoaka kely izy io mba hanafohezana fehezanteny sy hanampy sary.
Dr Dun Benson dia mpitsabo aretin-tsaina amin'ny zaza ary mpanoratra ny: Avereno ny ati-dohan'ny zanakao: Drafitra efa-bolana hamaranana ny fivontosana, hampiakarana naoty ary hampitomboana ny fahaiza-manao ara-tsosialy amin'ny alàlan'ny famadihana ireo vokatry ny fotoana elektronika. Jereo ny bilaoginy ao amin'ny drdunheast.com.